MASKAXDA EXICHEN: XEERARKA DALAGYADA SII KORDHAYA IYADA OO LOO MARAYO GEEDO - BOW
Sida loo helo goosashada hodan ah ee Exichen
Dhaqsaha oo dhan bannaanka u ah dalka our koraan basasha on hal ama noocyo kale oo basasha. Mid ka mid ah noocyada ugu badan ee la jecel yahay ee geedkaan waa basasha Exibichene. Sida loo soosaaro noocan oo kale ah habka seedling dhirta ah waxaan ka wada hadli doonaa maqaalka.
Bandhigga basasha waxaa lagu soo bandhigay dhulkeena dalkeena Holland waxaanay muddo dheer caan ku ahayd dadka degaanka badan ee xagaaga. Warshadu waxay leedahay midho weyn (min 300 ilaa 600 g). Iyadoo aan u baahnayn dayactir taxaddar leh, noocyo kala duwan oo dhirta ah ayaa awood u leh soo saarista waxsoosaar weyn oo halkii mitir oo mirir ah. Intaa waxaa dheer, bandhigtan waxaa inta badan lagu daraa salads kala duwan, halkaas oo ay ku bixiso dhadhan gaar ah, wax yar dhadhan macaan. By habka, sababta oo ah tan, waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "salad" basasha.
Ma taqaanaa? Khabiirka caanka ah ee reer Faaris Ibi Sina wuxuu ku qoray qarnigii labaatanaad ee ku saabsan gawaarida gawaarida: "Basasha la cuni karo waxay nadiifineysaa guryaha." Haddii aad diirka ka qaaddid basasha biyaha bakeeriga ah, waxay gacan ka geysan doontaa burburinta urta aan fiicnayn.
Badanaa abuurka beeritaanka warshadan waxaa laga iibsadaa dukaamada ama internetka. Kordhinta abuurka uma baahna dadaal badan. Waxaa jira waxoogaa faa'ido u leh Exichen. Mid ka mid ah dhibcaha waa dulqaad qabow oo liita. Oo waxaa lagu kaydin karaa meel diiran oo qallalan oo aan ka badnayn 5 bilood, si ka duwan noocyada kale ee basasha, kuwaas oo ku sii jira 6 ilaa 9 bilood.
Baro naftaada dhirta farsamada ee noocyada kale ee basasha: batun, roodhida, jiiska, shnitta, caleenta.
Markaad ka soo baxdo miraha, basasha Miro Caanuhu wuxuu awood u leeyahay inuu keeno 3 ilaa 5 kg oo nalalka halkii mitir labajibbaaran. Si dhirta si ay u koraan si ammaan ah, waa in si fiican loo beeray, oo aan kuu sheegi doono.
Ka hor inta beerto, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso substrate. First of dhan, waxay u baahan tahay in laga nadiifiyo dhammaan jeermiska cudurada quudin (microscopic fungi, bakteeriyada).
Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah hababka soo socda:
Daaweynta musqusha ee walxaha xasaasiga ah.
Waraabinta xal hal boqolkiiba ah ee kaneecada.
Saddex maalmood ka hor beerashada miraha, ciidda waa in lagu daaweeyaa xal iyadoo ku saleysan "Gamair" iyo "Alirina" (diyaarintaas waxaa lagu iibiyaa qaab kiniin ah). Waxaad u baahan tahay inaad kiniin ka qaadato mid kasta oo ka mid ah daroogada isla markaana ku qoyso 10 litir oo biyo ah. Next, ku buufin substrate leh xal iyo dabooli filim muddo saddex maalmood ah.
Dareemista ciidda waxaa lagu sameyn karaa diyaar garowga fungicide-ku salaysan: "Glyocladin", "Extrasol", "Planriz", iwm.
Insecticides sidoo kale wakiilada fiican oo ka dhan ah cayayaanka kasta ee ciidda. Mid ka mid ah daawooyinkaan waa Aktara.
Ciidda ma aha oo kaliya lagu sumoobi karaa, laakiin sidoo kale waa mid hodan. Ujeedadaas awgeed, diyaargarowga ku salaysan noolaha noolaanshaha ayaa loo isticmaalaa. Daroogooyinka ku jira qaabka ay ka kooban yihiin bakteeriyada: "Renaissance", "Tamir", "Baikal".
Tani weli way ka fog tahay dhammaan hababka ay suurtogal u tahay in jeermiska iyo diyaarinta substrate ah ee beerto. Mararka qaar bannaanka ayaa caydhsaday ciidda qubeyska biyaha ama dillaaciyey foornada, laakiin tani waxaa la sameeyaa kiisaska aanay suurtogal ahayn in lagu daweeyo ciidda qalab khaas ah.
On jeermiska ka daweynta carrada ma dhammaado. Hadda waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u doorato oo aad si fiican u dooratid habka substrate-ka. Dhulka ugu fiican wuxuu noqon doonaa isku dar ah humus, dhulka sodax iyo ciid qalafsan.
Basasha waa deris wanaagsan - kaabajka, xididdo, karootada, salaar, yaanyo, qajaar, bataati iyo strawberries.
Isku dar ah waa in loo diyaar garoobo 1:2:1. Waxa kale oo aad samayn kartaa substrate ah iyada oo aan dheeriga ah ee ciid, laakiin iyada oo lagu daro Doodwanaag. Xaaladdan, saamiga wuxuu noqon doonaa: 9:10:1.
Bandhigga basasha, markii ay koraan geedo, waxay u baahan yihiin diyaarinta shinni gaar ah ka hor beerashada. Waa in la diyaariyaa horraantii Maarso. Seeds waxay u baahan yihiin in lagu duuduubo maro qoyan oo ka tago xaaladdan 2-3 maalmood. Ka dib marka uu dhaco waqtiga loo cayimay waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo xal aqueous ah oo ah kaneecada. Si arrintan loo sameeyo, qaado litir oo biyo ah iyo 1 g oo ah kiniinka potassium.
In isku darka soojeedo waa lagu tirtiraa abuurka 8 saacadood (heerkulka isku dar ah waa inuu ahaado qiyaastii 40 ° C). Tani waxaa loo sameeyaa sun-saaridda.
Waa muhiim! Isku day in aad kala soocdo abuurka: waxaa wanaagsan inaad iska tuurto kuwa ugu yar, haddii kale maaha inay koraan, markaa waxaad wakhti, wakhti iyo wakhti ku dhumin doontaa aqalka dhirta lagu koriyo.
Khasaaradan oo kale, miraha waxaa si buuxda loogu diyaariyaa beeritaanka. Laakiin haddii ay dhacdo xaalado aan la filayn, miraha waxaa la badbaadin karaa dhowr maalmood oo dheeraad ah. Deegaanka qoyan ee ugu qumman.
Noocaan noocan ah uma dulqaadanayo cimilada qaboobaha ee adag. Sidaa daraadeed, waxaa suurtagal ah in dhulka Exibishen ku dego marka heerkulka hawada ee celceliska uu horey ama wax udhaco oo uu leeyahay akhris ku saabsan 8-10 ° C. Intaa waxaa dheer, caddayn basasha dalbada. Waxsoosaaridu si toos ah ayey ugu xiran tahay meesha soo degta. Haddii sida noocan oo kale ah lagu beeray meel qorraxda qoraxda ku badan tahay maalinta ugu danbaysa, markaa beergooyinku way ku farxi doonaan. Meelaha muraayadaha loo dhigo bandhigyada waxay keenaan miraha yar yar oo aan xitaa gaari karin 100 g.
Intaa waxaa dheer, basasha fasalka this waa xulasho ku saabsan halabuurka ciidda. Haddii substrate aan horay loo diyaarin (waxaan ka hadalnay arrintan kor ku xusan), ka dibna dhalidda, mar kale, waxay noqon doontaa mid aad uga hooseeya dhalidda on carrada bacrin ah.
Cadaadiska ciidda ee sii kordhaya khudradda waa in uu ahaado dhexdhexaad. Ka digtoonow dhulka hoostiisa, sababta oo ah qoyaan xad dhaaf ah ayaa sidoo kale dhaawici kara geedka.
Beeridda iyo noocyada sii kordhaya ee lagu koriyo
Si bandhig loogu sameeyo miro fiican, waa in si fiican loo beeray. Iyo mustaqbalka - ha ilaawin inaad is daryeesho.
Khudaarta beertu waa inaysan keenin wax adag. Seeds u baahan tahay in la beeray si qoto dheer ah 1.5 cm oo ku hay masaafada u dhexeeya godadka of 2 cm.
Isla markiiba ka dib markii la beerto goobta waxay noqon kartaa wax yar oo ku shub biyo diirran. Ka hor inta muuqaalka sprouts ugu horeysay ee geedo, heerkulka ee aqalka dhirta lagu koriyo waa in lagu hayaa ee kala duwan ee 20-22 ° C.
Bow Plugin ka dib markii laga beerto waxay u baahan tahay daryeel gaar ah. In xilliga seedling, geedka waa in ay helaan waraabinta joogto ah iyo hawo. Sidoo kale ha ilaawin inaad ilaaliso heerkulka loo baahan yahay ee lagu koriyo. Ka dib korodhka sprouts, heerkulka waxaa laga yaabaa in laga yareeyo 20 ° S illaa 14 ° S (habeenkii heerkulka ayaa la yareeyn karaa ilaa 10 ° S).
Ma taqaanaa? Waqtiga Hippocrates, basasha waxaa loo isticmaalay in lagu dagaallamo cayilka. Intaa waxaa dheer, Hippocrates waxay rumaysnayd in dhirta ay daaweyn karto gout iyo laabotimismka.
Ka dib qiyaastii laba bilood, geedo waxay bilaabaan inay isu diyaariyaan beeritaanka dhul furan. Si tan loo sameeyo, yaree tirada waraabka. Mararka qaarkood quficidda waxaa lagu sameeyaa iyadoo la yareeyo heerkulka. Si kastaba ha ahaatee, warshadda si caadi ah ula dhaqmaan.
Deriska xun ee basasha ee beerta waa - digirta, digir iyo sage.
Geediga qoryaha dhulka hoostiisa
Geedka Goobta geedi-socodka ah ee dhulka la furo waa inay dhacaan bilawga illaa badhtamaha-Maajo. Ka hor inta aan la beeri, caleemaha basasha ayaa gaaban la jarjarey ilaa 1/3 dhererka. Tan waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo in caleemaha aysan qalajin karin mustaqbalka. Marka hore hubi bacriminta caadiga ah ee carradaada. Haddii aysan aheyn mid bacrin ah, ka dibna geedi socodka beerto, waa cantoobo ash, humus iyo 1-2 g of superphosphate waa in lagu daraa god kasta. Bacriminta Nitrogan waxaa lagu dari karaa kobcinta xididada firfircoon ee firfircoon.
Geedo yihiin beeray qoto dheer oo ah 2-3 cm, ka dib markii kaas oo ciidda waxaa cadaadiyey wax yar. In geedi socodka beerto kasta oo kasta waa in la waraabiyo leh 0.5 litir oo biyo diirran. Si looga hortago cudurrada suurtagalka ah, khudradda waxaa lagu waraabin karaa xal of 1% KPs.
Si nalalka si fiican u koraan, u koraan, ugu dambeynna u soo saaraan dalag fiican, waxay u baahan yihiin in si sax ah loo beero: u fiirso fogaanta 30 cm inta u dhaxaysa safarka iyo masaafada 20 cm oo isku xigta.
Xeerarka daryeelka ee basasha goobta
Daryeelka saxda ah ee Bandhigu wuxuu wax ku darsanayaa dhalidda ugu badan ee dhirta. First of dhan, basasha u baahan yihiin in la waraabiyo si joogto ah iyo dhexdhexaad ah.
Shucuur adagi uma qalanto. Waxay noqon doontaa mid ku filan in la qaado hal mar isbuucii, iyo muddooyinka qallalan - 2-3 jeer toddobaadkii.
Ha ilaawin sariiraha cawska leh basasha waqtigooda. Dhirta xad dhaafka ah waxay qaadan kartaa dhammaan waxyaabaha waxtar leh ee ka soo baxa ciidda, natiijada, dhirtaadu ma lahaanayso miro iyo miisaan ku filan. Weedinta waa in si taxadar leh loo fuliyaa si aanay u dhaawacin xididdada dhirta. Geedaha waxay u baahan yihiin budo iyo ku rusheeyaa boodhka ama ash. Qallajin leh humus waxay ka caawineysaa in la dedejiyo koritaanka Exibichen.
Waxaa lagula talinayaa in aad quudiso 1-2 jeer todobaad kasta. Sababtaas waxaad isticmaali kartaa xal HOL (HOL) ama Doodwanaag. Ku waraabiyo sariiraha leh xal aqueous of nitrogenous ama Nitrate walxaha dardar-gelin doonaa koritaanka basasha.
Waa muhiim! Haddii ciidda meesha dhirtaada ay koreyso, waxaa la bacrimiyey humus laba sano ka hor beerashada, ka dibna waxaad heli doontaa goosashada wanaagsan. Laakiin haddii aad bacrimiso ciidda leh humus inta lagu guda jiro beerashada iyo dayactirka, tani waxay gacan ka geysan kartaa samaynta nalalka dabacsan iyo koritaanka cagaarka xad-dhaaf ah.
Sidoo kale, ha iloobin dagaalka ka dhanka ah cayayaanka oo inta badan saameyn ku leh noocyada kala duwan ee dhirta. Mid ka mid ah cadawga ugu weyn ee Exixichen waa xayrta budada ah (pereosporosis).
Cayayaanka ugu khatarsan ee basasha ayaa ah duubista baska iyo nematode, taas oo yarayn karta dhalidda dalagga.
Haddii cudurku uusan bilaabin inuu ku dagaalamo waqtigiisii, markaa dhalidda basashaada ayaa la yarayn karaa ugu yaraan 2 jeer. Si loola dagaallamo dib-u-kicinta, waxaad isticmaali kartaa oxychloride copper, isku dar ah Bordeaux, ama daroogada loo yaqaan 'Polycarbacin'.
Ma suurtogal in la koro warshad iyada oo aan geedo ah
Sida ay u koraan basasha of Exhibishen laga bilaabo abuurka iyada oo geedo, waxaan u sheegay, marka lagu daro, macluumaad la mid ah waxaa laga heli karaa video ah. Laakiin khudradda ayaa sidoo kale laga abuuri karaa seedlessly, inkastoo badan oo bannaanka u khibrad leh ma ku talinaynaa iyada isticmaalaya.
Inta badan, wax soo saarka weyn ee basasha, kuwaas oo u baahan in la soo saaro geedka dhirta oo idil, isticmaal habka qaansadeed ee beerista bandhigga.
Habkani wuxuu ku habboon yahay iyaga, maxaa yeelay ururada waaweyn ayaa waqti badan iyo lacag badan ku qaataan geedo sii kordhaya.